पाल्पामा २१ घर निर्माण
पाल्पा। नेपालमा विनाशकारी भूकम्प गएको तीन वर्ष पूरा भएको छ। तर, यो अवधिमा भएको पुनर्निर्माणको प्रगति भने सन्तोषजनक छैन। आखिर यो अवधिमा कति भयो त काम ? भूकम्पबाट झण्डै १० लाख निजी घरमा क्षति पुगेको थियो। करिब साढे सात हजार विद्यालय, एक हजार दुई सय स्वास्थ्य संस्था र साढे सात सय सांस्कृतिक सम्पदामा क्षति पु‍गेको थियो। बाँकी अंश»
जोधपुर, भारत। उत्तरी भारतको एउटा विशेष अदालतले धर्मगुरू आशारामलाई १६ वर्षीया बालिकाको बलात्कार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको छ। विशेष अदालतका न्यायाधीस मधुसुधन शर्माले ७७ बर्षीय धर्मगुरू आशाराममाथि करिब पाँचबर्ष पहिले उनकै अनुयायी परिवारकी एक १६ बाँकी अंश»
काठमाडौं। नेकपा एमालेका नेता एवम् नेपाल–भारत प्रवुद्ध समूहका नेपाल तर्फका सदस्य डा. राजन भट्टराईले काठमाडौंमा मात्रै नभएर अब दिल्ली र बेईजिङमा पनि भारत–नेपाल–चीनबीचको त्रिदेशीय साझेदारीबारे बहस सुरु भएको बताएका बाँकी अंश»
काँकडभिट्टा। नेपाल, भारत, बंगलादेश र भुटानबीच चारदेशीय सीधा बस यातायात सेवा सञ्चालनका लागि बंगलादेशको राजधानी ढाकाबाट छुटेका दुई यात्रुबाहक बस आज नेपाल प्रवेश गरेको छ। बाँकी अंश»
धरहरा चाँडो निर्माण हुन्छ : प्रम ओली
आइजीपी खनाल दाहिने हातमै किन लगाउँछन् घडी ?